‘संसद पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’ - Kohalpur Trends
‘संसद पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’
२८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीहरुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् । संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार भएको तर्क गर्दै आएका उनीहरुले फरक फैसला भए संसद अधिवेशन नबोलाउन सक्ने धम्की दिएका हुन् ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् समस्या आउने बताए । ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ’ न्यौपानेले भने, ‘अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ?’
संसद विघटनको अधिकार मन्त्रिपरिषदमा छ
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले संविधानका शब्द पढेर कार्यकारिणीले के गर्न पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने अधिकारक्षेत्र केलाउन नसकिने जिकिर गरे । ‘कार्यकारिणीको अधिकारको सिर्जना संविधानका शब्द पढेर मात्रै हुँदैन । त्यो शब्दमा उल्लेखित दर्शन के हो ? त्यसको सिद्धान्त के हो ? भन्ने बुझ्नुपर्छ’ उनले भने ।
‘राजनीतिक रुपमा समस्या आयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतामै गएर त्यसको छिनोफानो गरौं भन्नुभएको छ । गल्ती गरेको भए आफूलाई हराइदिनुस् भन्नुभएको छ’ अधिवक्ता कार्कीले भनिन्, ‘५ वर्ष अगावै चुनाव हुनु भनेको त जनताको लागि अवसर पनि हो, प्रधानमन्त्रीमार्फत जनताले यो अवसर पाउनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका १० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बुधबार नै बहस नगर्ने बताइसकेका छन् । आफूले राख्ने तर्क इजलाससमक्ष आइसकेको भन्दै उनीहरुले बुधबार बहस नगर्नेमा नाम लेखाए ।
हालसम्म संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सरकार पक्षबाट ४० जनाले बहस गरेका छन् ।
Previous Previous post: अमेरिकामा प्रेमीसंग कोठामा रंगे हात यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेपछि भारत फर्किन प्रियंका
Next Next post: बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य